Reproduction amin'ny tapaka | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Reproduction amin'ny tapaka
Inona no atao hoe stratification sy ny karazany?
Ny teny hoe "stratification" indraindray dia mampatahotra ny feony, toy izany tokoa ny siansa. Na izany aza, ny mpitrandraka amin'ny lohataona na efa ela, na zaridaina na florist dia efa hatry ny ela na ho haingana no miatrika ity dingana ity. Andeha hojerentsika hoe inona no fototry ny voa sy ny fomba fitondran-tena tsara. Fantatrao ve?
Fambolena sy fikarakarana volombava amin'ny varavarankely
Ny mofomamy dia zavamaniry izay avy amin'ny karazan-kazo maitso sy maitso ary semi-evergreen sy hazo madinika avy amin'ny fianakaviana Olive. Ny ankamaroan'ny any Eoropa, Aostralia, Afrika Avaratra ary Azia. Ny ankamaroan'ny karazana bibidia dia any Japon, Shina, Taiwan ary Himalayas. Fantatrao ve? Privet dia ahitana karazany dimampolo.
Kanto Japoney eo amin'ny tranokalanao
Ny Chaenomeles, na ny kavalie japoney, dia nitombo ho toy ny firavaka sy fanatsarana ny kolontsaina. Mandritra ny voninkazo, ity zavamaniry mahafinaritra mahavariana ity dia firavaka ho an'ny zaridaina rehetra, ary ny voankazo dia mamolavola tsindrin-tsakafo: fantsom-bokatra sy fitehirizana. Ny chaomomeles dia tena ilaina ho toy ny fefy manodidina ny faritra iray, ny sisin-taniny fotsy manjaka dia mihazona ny tany malalaka.
Ny fomba hananana balsamines ao an-jaridaina
Balsam - voninkazo isan-taona, izay zavamaniry voninkazo, tsara alokaloka. Ny balsama dia manana tsiranoka mahitsy, mihombo hatramin'ny 50 cm, ravina oval ho 12 cm ny lavany. Balsam dia tsara ho an'ny famoronana hatsaran-tarehy ao amin'ny aloky ny zaridaina. Azonao atao ny maniry voninkazo ao amin'ny zaridaina mavomavo eo amin'ilay toerana, ary ao an-trano eo am-baravarankely.
Nahoana no ilaina ny hysop?
Hyssop Majestic - zavamaniry iray izay mahasoa foana amin'ny toekarena. Ny hyssop, na ny manga St. John's miora, avy amin'ny fianakaviana yasnotkovyh, dia mitombo any Asia, Mediteraneana, Caucasus, Crimea. Tiany ny trano fialofana sy ny havoana mihandrona. Ny fambolena ny hyssop hatramin'ny taloha dia heverina ho fombafomba manan-danja sy masina. Ny pretra sy ny shamanita rehetra dia nitandrina ity zavamaniry ity tamin-katsaram-panahy sy fikarakarana.
Ahoana ny fomba hanamboarana zana-trondro
Juniper dia zavamaniry iray izay an'ny fianakaviana cypress. Nipoitra 50 tapitrisa taona lasa izany, ary manodidina ny 70 ny karazan-javamaniry eto amin'izao tontolo izao. Ny karazana zana-kavoana sasany dia mahatratra hatramin'ny 15 m avo. Ny karazany sy ny karazam-pandehanana ampiasaina amin'ny tontolon'ny lozam-pifamoivoizana Avelao hiditra mivantana amin'ny karazana sy ny karazana zana-trondro.
Fomba hanamboarana efitrano gerbera amin'ny varavarankely
Gerbera dia iray amin'ireo zavamaniry izay mendrika ny mendrika ny mpamboly sy ny florists. Ny voninkazo lehibe toy ny voninkazo eo amin'ny lava, ny tsatoko tsy misy volom-borona dia mety ho fanaka tena tsara ho an'ny tokantranonao. Mazava ho azy, izany dia azo atao raha tsy amin'ny tranga raha ny fiahiana ara-dalàna ny gerbera dia azo antoka, indrindra indrindra amin'ny ririnina.
Ny fomba hanamboarana oleander ao an-tranonao
Oleander dia endriky ny vatom-pianakaviana kutrov. Manana voninkazo tsara tarehy amin'ny loko isan-karazany sy ravina mainty maitso matevina. Misy marika maro mifandraika amin'ny solontenan'ny flora, famantarana sy finoanoam-poana. Na dia eo aza ny toetry ny kirihitra, ao amin'ny subtropics dia ampiasaina amin'ny endrika fanorenana ny tontolo iainana.
Lila: torohevitra momba ny fambolena sy fiahiana
Ny voninkazo dia tsangam-boninkazo marevaka miaraka amin'ny felam-boninkazo feno voninkazo tsara tarehy, izay mampifalifaly tsiranoka tsy misy dikany sy malefaka. Ity zavamaniry ity dia tena manimba ny fako, izay ahafahanao manamboatra ny tranokala sy ny endrika amam-bika, ary vondrona, ary na ny fefy miaina aza. Aiza no hambolena lava Ny fepetra tsara indrindra ho an'ny lilac dia toy izao: toerana fonenana; mafana ny tany, miaraka amin'ny drafitra tsara sy ny indostrian'ny asidia, akaikin'ny tsy fiandaniana; Ny lalan'ny rano anaty rano farafahakeliny iray metatra sy sasany avy eny ambony. ny fiposahan'ny masoandro amin'ny ankamaroan'ny andro; fialofana amin'ny drafts.
Fikarakarana sy fitomboana ho an'ny begonia an-trano
Begonia dia toeram-pambolena iray izay an'ny fianakavian'ny Begoniyev ary manamboatra efamira, zaridaina ary trano fonenana. Eo amin'izao tontolo izao dia manodidina ny 900 ny karazan-tsavony feno voan'io zavamaniry io. Homeland Begonias - Azia atsimo atsinanana. Ny haben'ny zavamaniry dia mety amin'ny 5 cm hatramin'ny 3 m amin'ny lavany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianatra ny tsiambaratelo momba ny fikarakarana ny fombafomba tsara tarehy ao an-trano ianao.
Ny tsiambaratelo rehetra dia ny mamolavola olimpika ao an-trano
Ahimenez dia mpikambana ao amin'ny fianakaviana Gesneriev. Misy karazany 50 isan-karazany eto amin'izao tontolo izao. Homeland Ahmenes - Amerika Atsimo sy Afovoany, fantatra hatramin'ny tamin'ny XVIII taonany. Ity lahatsoratra ity dia hampahafantatra anao ny tsiambaratelon'ny fambolena voninkazo any an-trano. Fantatrao ve? Ahimenez - havan'ny fôsily.
Karazam-pambolena sy fikarakarana rosemary, toro-hevitra momba ny mpamboly mpamokatra voninkazo
Rosemary dia somary mena ary tsara kokoa amin'ny fery. Na izany aza, ny rosemary dia tsy ampiasaina amin'ny fihinanana ihany, fa misy karazana fanasitranana sy iankinan'ny ilany izay ampiasain-dry perfumers sy cosmetologists. Rosemary: Plant Description Noho izany, inona no tsimparifary? Izany dia onja mahatsiravina misy ravina, fanjaitra, mitovy amin'ny pine nify.
Tsara ny mikarakara ny tonelina ao an-trano
Ny Thunbergia dia mendrika ny voninkazo tsara tarehy, izay azo avy amin'ny karazan-damosina samihafa, ary koa amin'ny maha-rivotra azy. Afaka avela hitsangatsangana eny an-tany izy, hantsana ao anaty vilany mba hikolokolo azy amin'ny lolo mena, na avelao hikolokolo. Na izany aza, ho an'ny tany misokatra, dia mitaky fikarakarana fanao isan-taona. Ny fepetra tsara indrindra amin'ny fitomboan'ny tunbergia ao an-tokantrano Ny fambolena fitondran-tena faran'izay kely ao tunbergia ao an-trano.
Ny fitomboan'ny voankazo sy ny voankazo masomboly
Magnolia dia iray amin'ireo voninkazo tsara tarehy indrindra, mahavariana ny olona rehetra manodidina ny hatsarany, ny variegation ary ny fofona miavaka. Ireo mpankafy ny endriny tsy mendrika dia miezaka ny manamboatra ny faritra misy azy amin'ny karazan-tsakafo toy izany, ary mitodika amin'ny fomba isan-karazany.
Ny tsiambaratelon'ny fambolena any Iberis ao amin'ny zaridainanao
Iberis evergreen dia herintaona tsy hita isa avy amin'ny fianakaviana mamohivelo (karaoty), izay manome isa 40 varieties. Ny faharoa - Iberiana, dipoavatra, stennik, razlelepestnik. Eo amin'ny tontolo voajanahary dia mitombo any amin'ny faritra be tendrombohitra any Azia, any amin'ireo faritr'i Mediterane, any Caucase, any Crimea ary ambany ny Don. Fantatrao ve? Iberis dia nahazo ny anarany avy amin'ny teny Iberia - ilay anarana grika tranainin'ny Espaina ankehitriny, izay misy ny tendron'ireo tendrombohitra iberiana.
Clematis manapaka amin'ny lohataona sy ny fararano
Clematis dia akorandriaka manana voninkazo tsara tarehy amin'ny loko samihafa. Ny fitomboan'ny voninkazo dia manomboka amin'ny lohataona ka hatramin'ny fararano. Ny fako dia lafo, noho izany dia ilaina ny fampahalalana momba ny fomba hampitomboina ny clematis ho an'ny mpamboly maro. Fantatrao ve? Clematis dia zavamaniry isan-taona izay an'ny fianakaviana Buttercup ary hazo namboarina.
Fambolena sy fikarakarana multiflora chrysanthemum, endri-pamokarana zavamaniry mitovitovy
Ny floristika sy ny lamaody zaridaina dia mitombo haingana toy ny indostria hafa. Vondronà zavamaniry vaovao, izay nandresy ny tsenan'ny voninkazo ary eo an-tampon'ny lazan'ny mpamboly, dia krysanthemum multiflora. Noho ny toetrany tsara tarehiny, io voninkazo io no nandrombaka ny fo tsy avy amin'ny florists matihanina, fa koa ireo mpankafy izay te-hanoritra ny teti-dratsiny.
Fitsipika momba ny fiterahana kampsis: toro-hevitra avy amin'ny mpamokatra voninkazo efa za-draharaha
Bilaogera maro no liana amin'ny fanontaniana, inona ny fomba fananganana ny kampsis. Ny iray dia mahafantatra fotsiny ny famokarana taranaka, ny hafa dia mahafantatra fomba maromaro amin'ny fitomboan'ny zavamaniry tanora avy amin'ny tifitra na ampahany amin'ny rafitra fototra. Mba hahafahanao mahafantatra sy mahay mampiasa ny fomba rehetra azo atao amin'ny famokarana voninkazo, nanangona ity lahatsoratra ity.
Ahoana no fomba hitomboan'i Venus flytrap ao an-trano
Amin'ny zavaboahary dia misy ny ramanavy. Venus flytrap na dionea (Dionaea muscipula) - iray amin'izy ireo. Ity isaky ny herisetra ao an-trano ity dia manana ravina 4-7 mamirapiratra mamiratra miaraka amin'ny fery eo amin'ny sisin-driaka sy ny ratra madinika. Rehefa nikasika, ny ravina rehetra dia mety ho toy ny kalsa oyster.
Ahoana no hambolena hazo hydrangea ao amin'ny zaridaina: fambolena sy fiahiana karakaroka
Ny Hydrangeas dia malaza amin'ny mpamboly voninkazo sy ny mpamafy zavamaniry eran'izao tontolo izao. Ny fitiavana ny hydrangea dia noho ny: ny zavamaniry dia mamolavola sy maniry betsaka amin'ny lohataona ka hatramin'ny fararano. Mahavariana ny karazana sy ny hatsaran-tarehy ny felany. Ny endriky ny loko no tena mampivelatra (ankoatra izany, afaka manova ny lokony sy ny lokony mandritra ny fotoana iray ny zavamaniry).
Karazana fambolena sy fikarakarana ny menaka ao amin'ny zaridaina
Ny mintan'ny garda dia manondro ireo zavamaniry izay naheno ny rehetra, na izy ireo na manana ny zarony manokana izy ireo na tsia. Ampiasaina amin'ny fitsaboana izy io, ampiasaina amin'ny fitahirizana sakafo isan-karazany, ary koa ny fisotroana divay sy cocktails. Ankoatr'izay dia mbola ampiasaina amin'ny fofom-paty ny felana, ary indray mandeha farafaharatsiny dia nanandrana ny tsiranoma mena.
Fanamboaran-tsakafo marevaka ny trano fandroana - voatabia "Daty Yellow": varim-panazavana momba ny voatabia, indrindra ny fikarakarana
Volana zoma volana Jolay
Top 5 trano fonenana tsara indrindra sy mpamatsy gazy matihanina
Ny fomba hanamboarana tongolo gasy tsara
Ohatrinona ny lanjan'ny turkey sy ny lobolobo lehibe
Fambolena karazan-kazo fanangonam-bokatra "Stanley" ("Stanley"): karazana karazana, fambolena sy fiahiana
Indraindray mampihomehy - ny voninkazo "Gomphrena Spherical": mitombo avy amin'ny voa sy sary
Ahoana ny fomba hampitombo ny sikam-piaviana tsara tarehy eo amin'ny varavarankelinao
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Reproduction amin'ny tapaka